अस्ट्रेलियाको भिसा नीति फेरियो, के-केमा भयो परिवर्तन? :: Setopati
अस्ट्रेलियाको भिसा नीति फेरियो, के-केमा भयो परिवर्तन?
हेमन्त काफ्ले सिड्नी, असार १७
जुलाई १ अर्थात आजबाट अष्ट्रेलियाले आफ्नो भिसा नीतिमा केही फेरबेदल गरेको छ।
कोरोना महामारीका कारण सन् २०२० को मार्चदेखि ठप्प आप्रवास सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा पुनर्जागरण गरी आर्थिक समृद्धीको बाटोमा अगाडि बढने नीति अनुसार परिवर्तन गरेको हो।
सोही अनुसार भिसा नीतिमा भएका परिवर्तन लागूसमेत भइसकेका छन् भने केही बाँकी परिमार्जनहरू आउँदा दिनमा लागू हुने भएका छन्।
सरकारले घोषणा गरेको नयाँ नीति अनुसार हाल अस्ट्रेलियामा रहेका अस्थायी भिसाबाहक जो पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा कार्यरत छन् उनीहरूले आफ्नो बसाइँ लम्ब्याउन सक्ने भएका छन्।
यस्तै डिसेबिलिटी, एज केयर, मेडिकल, कृषि, पर्यटन र हस्पिट्यालिटी उद्योगहरूमा काम गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले पाक्षिक रूपमा ४० घण्टा भन्दा बढी रोजगारी गर्न पाउनेभएका छन्।
विद्यार्थी र वर्किङ होलिडे भिसामा आउने लाखौं व्यक्तीको अभाव परिपुर्ति गर्न अष्ट्रेलियन सरकारले नयाँ भिसा नीति लागू गरेको हो।
यद्यपी अस्ट्रेलियन सरकार सन् २०२१/२२ को आप्रवास कार्यक्रम १ लाख ६० हजारमा सीमित गर्ने आफ्नो योजनामा अडिग छ। जसमा अघिल्लो वर्ष २०२०/२१ का दक्ष कामदारको निम्ति छुट्ट्याइएको ७९ हजार ६ सयलाई समावेश गरिएको छ।
गृह मामिला मन्त्रालयका अनुसार अस्ट्रेलियामा रोजगारी सृजना गर्ने, लगानी बढाउने र आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने भिसालाई प्राथमिकतामा राखिने भएको छ।
सन् २०२०/२१ मा बिजनेस, इन्भेस्टमेन्ट एन्ड इनोभेसन कार्यक्रम अन्तर्गतको भिसा उपलब्धतालाई झन्डै दोब्बर बनाउँदै १३ हजार ५ सय र ग्लोबल ट्यालेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट कार्यक्रम श्रेणीको भिसालाई तीन गुणाले बढाएर १५ हजार पुर्‍याइएको छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भनेको पार्टनर भिसा अन्तर्गत दुवैले अङ्ग्रेजी भाषाको परीक्षा अनिवार्य दिनुपर्ने भएको छ। कृषिमा कामदार अभाव र यसको प्रत्यक्ष प्रभावका कारण कृषि भिसालाई बढावा दिइएको छ। जसमा यसपटक थाइल्यान्ड, क्याम्बोडिया, ब्रुनाई, बर्मा, फिलिपिन्स, मलेसिया, लाओस्, भियतनाम, सिङ्गापुर र इन्डोनेसियाका कामदारले कृषि कामदार भिसा पाउनेछन्।
माइग्रेसन अकुपेसन लिस्ट अर्थात स्थायीत्व प्रकृयाको महत्वपूर्ण पाटोमा एकाउन्टेन्ट, ईन्जिनियर, सफ्टवेयर डेभलपर र सेफलगायत २२ नयाँ पेशाहरू सूचिकृत गरिएको छ। कोरोनाभाइरस पछिको समयमा अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्र उकास्न ती पेशालाई अत्यन्त आवश्यक भन्दै सरकारले उक्त सूचीमा थपेको हो। उक्त सूचीमा कुल ४१ पेशाहरू सूचीकृत भएका छन्।
अबदेखि अस्ट्रेलियाली नागरिकता लिन आवेदन हाल्नेले पहिलेको भन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। ३० जुनसम्म २ सय ८५ डलर रहेको अस्ट्रेलियन नागरिकता आवेदन शुल्क नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै ४ सय ९० डलर हुने भएको छ।
कस्तो छ, यहाँको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार १७, २०७८, १७:३६:००